Ukufa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Lahla okudala ukuze ufumane indawo entsha.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Ukufa»
Ileta yokufa ayithethi ngokusweleka ngokoqobo kwakhe nawuphina umntu. UCanzibe imele ukufa kwenye into, njengeprojekthi, icebo okanye ubudlelwane. Eli khadi likwaphawula ixesha lokuvuna, elifanekiselwa kumgangatho wokuqala wamathambo esivuno.
Ukuba iziqhamo zasehlotyeni azivunwanga, zilahlekile kubukrakra basebusika, kwaye abantu abatyi. Njengokuba isikela lisika iintambo ezisibophelela kwezakudala, liyasikhulula ukuba siqhubele phambili ngaphandle koloyiko, kuba akukho nto sizakuphulukana nayo. Yonke into ethenwayo iphinda isetyenziswe ukuze kuchume ikamva, ke akukho nto ilahlekileyo, ngaphandle kwemijikelo yonyaka yenzuzo kunye nelahleko.
Kwezona ndawo zangoku zeTarot, sibona uKufa kukhwele ihashe nakwizikrweqe ezimnyama. Ugxininiso kwezi zikhava sisohlwayo sesono, njengakwindlela yokuba iSibetho sexesha lakudala (apho umfanekiso wokufa wawusekwe khona) sasetyenziselwa ukucacisa Umsindo kaThixo. Ngethamsanqa, kule mihla, asixineki kangako ngefilosofi enetyala.
Zikhulule kwixa elidlulileyo elingasasebenziyo kakuhle kwaye uye kwikamva.
Ikhadi lokufa likucebisa ukuba wohlukane nomyalelo omdala. Unokufuna ukuvala iiakhawunti, ugqibe imisebenzi engagqitywanga, kwaye uvune isivuno sakho. Lixesha lokuba uqhubeke uye phambili. Ukuba usike iintambo ezikubophele kwiindlela ezindala kunye neendibano eziphelelwe lixesha, unokuzikhulula ukuze ujoyine ukutshayela kokukhanya okungenayo. Esi ayisosizathu sokwala abanye okanye ukubenzakalisa nangayiphi na indlela. Lixesha nje lokuya kwiminqweno yakho yokugqibela.
Sukuvumela i-nostalgia kunye nokunyaniseka okunxibileyo kukubambe. Kulungele ukwenza nantoni na ukuze ufike apho ufuna ngokwenene ukuba khona.